Waxa la sheegay in macalimiinta wax ka bara magalada addis ababa aanay soo shaqo tagi Karin hadii aanay qaadanin talaalka covid 19ka. – ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in macalimiinta wax ka bara maamulka magaalda addis ababa oo dhan dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladaba aanay soo shaqo tagi Karin hadii aanay qaadanin talaalka cudurka covid 19.
Xafiiska waxbarashada ee maamulka magalada addis ababa ayaa ku sheegay waraaqdi u soo qoray 25kii bishii 12aad ee 2013ka in u macalimiinta wax ka bara magaalada addis ababa dugsiyada ku yaala oo dhan ee kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawlada oo dhanba iyo shaqaalaha kale ee machadyada waxbarashada in u uqabtay olole talaalka covid 19ka ah oo lagu talaalay 28kii nahaase 2013ka ilaa 5tii pagume ee2013kii, sidaas darteedna maclimiinta iyo shaqaalaha dugsiyada oo dhami in ay ku khasbanyihin in ay talaalka covid 19ka ay qaatan. Waxana u uga digaya xafiisku cidi aan is talaalin ee aan sidanin waraqda cadaynaysa in ay is talaaleen aanay soo shaqo tagi Karin shaqadooda.
Sida u soo ogaaday wargayska addis maleda ayaa ah in u xafiiska waxbarashada ee magaladan addis ababa u dugsiyada oo dhan ee ka jira magaladan addis ababa hadii ay yihiin kuwa gaarka loo leeyahay iyo kwa dawladaba in loo qaybiyay waraaqo. Waraaqahaasi loo diray dugsiyada oo dhan ayaa waxa ku xusnayd fariinta ah in cid kasta oo ka shaqaysa dugsiyada aanay soo gali Karin machadyadaasi hadii aanay soo qaadan talaalka cabuqa covid 19.
Wargayska oo waraystay madaxa xafiiska cafimaadka ee maamulka magalada addis ababa mudane Yohaanis Jaaka ayaa waxa u sheegay in ay ka wada hadleen xafiiska waxbarashada ee maamulka addis ababa oo loo soo ban dhigay madal cusub oo talaalka cudurka covid19ka oo heshiis laga gaadhay in macalimiinta iyo shaqaalaha dugsiyada magalada addis ababa oo dhan ay talaalka qaatan. Waxa kale oo u intaasi u raaciyay in xiligan xaadirka ah fayraska nooca cusub ee loo yaqaano dhelta u sibaan ugu faafayo meelo badan oo dhalinyatradana wax yeeleya, sidaasi darteedna ay ku hawlan yihiin sidi ay talaalka u gaadhsiin lahaayrn macalimiinta iyo shaqaalaha oo dhan ee jooga magaalada addis ababa.
Waxa u Dr. Yohaanis u sheegay in magalada addis ababa ay ka jiran in ka badan 60 kun oo macalimiin ah, dabeecadooda shaqona ay tahay mid ay la kulmayaan arday faro badan sidaasi darted looga baahanyahay in ay talaalka qaataan. Xiligan xaadirka ahna cudurka korona fayraska nooca cusub oo aad u faafaya dhalinyaradana si balaadhan ugu faafaya si loo xakameeyo faafitaankiisa in hawsheeda lagu jiro.
Wargayska addis maleda oo isku dayay in u soo xaqiijiyo waraaqda u qoray xafiisku ee xambaarsan digniinta ah in shaqaalaha iyo macalimiinta ka shaqeeya machdyada waxbarashada oo dhanin ay khasab ku tahay in ay is talaalan, ayaa waxa lagu sheegay talaalka ay qaadanayaan maclimiintu in aanu ahayn mid ogolaanshahooda laga waydiinayn. Waxana keentay arintaasi cudurka oo aad u faafaya awgeed, in kasta oo dalka itoobiya imika ka hor ay ka dilaaceen cudurada faafa hadana taarikhda itoobiya kama jirin talaal si toos ah cudurada loogaga hortago. Sidaas darted waxa bulshada looga baahan yahay in ay ka fa’aidaystaan. Talaalka loo soo diyaariyay oo loogama baahna in ay cabasho ka soo jeediyaan. Waxa u intaasi raaciyay in macalimiinta looga baahanyahay in ay ilaaliyaan cafimaadka ardaydooda oo naftoodana ay ka ilaaliyaan cudurkan sida aadka ah u faafaya oo ay talaalka qaataan.
Macaliiminta lagu khasbay in ay talaalka qaataan qaar ka mid ah ayaa wargayska addis maleda u waramay in ay haboontahay in talaalka ay ku qaataan macalimiintu ogolaanshahjooda oo aan la lagu khasbin. Waxaana ay sabab ka dhigteen sida ay wargayska ugu warameen in macalimiinta qaar ay qabaan cuduro kale oo talaalka covid 19na u uga sii daryo xanuunadooda taasina ay walaac ka qabaan. Waraaqadaha loo soo dirayna aanay mudnaanta ku siinin cudurada ay qabaan iyo ogolaanshahoodaba oo ay arintaasina ka xun yihiin.
Wargayska addis maleda ayaa isku dayay in u cabashada macalimiintaasi iyo shaqaalahaba u wax ka waydiiyo xafiiska waxbarashada ee maamulka magalada addis ababa, balse waxa u ku guul daraystay wargaysku in u wax jawaab ah u ka helo cabashada shaqaalahasi ee machadyada.
Total views : 6692989